Omunye usaziwayo usethathe indawo kaBonang kuMetro FM | News24
Omunye usaziwayo usethathe indawo kaBonang kuMetro FM
Johannesburg – Umethuli wezinhlelo kumabonakude, uDineo Ranaka, uyena osevale isikhala sikaBonang Matheba kuMetro FM.
ICity Press ithole ngemithombo yayo ukuthi uRanaka – owayengumsakazi weYFM kanye ne—5FM – usezojoyina uLerato Kganyago kanye noQuinton Masina, odume ngelika-“Naked DJ”, kusukela ngoLwesibili ohlelweni iThe Front Row, oluqala ngo-10am kuya ku-12:00pm. URanaka uzwakale okokuqala kulolu hlelo ngoLwesibili.
OLUNYE UDABA: Useyilaxazile iMetro FM uBonang, ubonakale esiteshini esisha
Kubikwa ukuthi uBonang usule isigubhukane kuMetro FM ngoMsombuluko ngemuva kohlelo. Ezinkundleni zokuxhumana uzwakalise ukungenami ngokutshelwa ngomzuzu wokugcina ukuthi kuzoba nezinguquko ohlelweni lwakhe, okubalwa kuzo ukufakwa noKganyago, okuke kwaba nezinsolo zokuthi abahoshelani naye.
UKganyago ubekade eshayela uhlelo lwantambama, iThe Drive, noMoeti “Mo Flava” Tsiki kanti uye wamjoyina uMatheba ohlelweni lokuqala ngoMsombuluko.
Kodwa-ke, ngemuva kohlelo, uMatheba uthuse abaningi ngesikhathi ememezela ukusula kwakhe kuMetro FM ngemuva kweminyaka emithathu esohlelweni.
Kuphinde kwavela nezindaba zokuthi uBonang ube esebonakala ngoMsombuluko ntambama emahhovisi esiteshi esisha, iTouch HD, nesiphethwe ngomunye wabasakazi ababengaconsi phansi kuMetro FM, uTbo Touch.